-Achọ Ịhụnanya? Manspreading ike Ịbụ The Key na-Ịga nke Ọma - News Ọchịchị
-Achọ Ịhụnanya? Manspreading ike Ịbụ The Key na-Ịga nke Ọma
Iji videos na a Tinder-ịke ngwa, eme nchọpụta kpebisiri ike na ndị na-agbatị onwe ha e gosiri ihe mara mma site nwere mmekọ
Isiokwu a na-akpọ “-Achọ ịhụnanya? Manspreading nwere ike ịbụ isi ihe na-aga nke ọma, ọmụmụ-atụ aro” e dere site Ian ịlele Science nchịkọta akụkọ, n'ihi na The Guardian on Monday 28th March 2016 19.00 UTC
Hapụ sachaa mkparịta ụka, esi ísì dị ọcha ma na-echeta aha onye. Na ụwa nke oge a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ihe na-aga nke ọma bụ na-ohere.
The ọhụrụ n'ọnụ n'ihi na-achọta ịhụnanya, ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ a n'anya, -abịa site US na-eme nnyocha na-eji ọsọ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị videos na a Tinder-ịke ngwa na-egosi na ndị mmadụ nọ gosiri dị ka ihe mara mma mgbe ha na-agbatị onwe ha.
Ndị mmadụ dịrị torsos, kewapụrụ ha ụkwụ na-agbasa ngwá agha ha dum na-utịp na ihe mmasị ịhụnanya karịa ndị ọzọ, eleghị anya n'ihi na nọrọ nyere echiche openness na dominance, na-eme nnyocha na-ekwu.
Na ntule ndịiche, ndị na-hunched onwe ha elu, ma gafee ha aka na ụkwụ, agazitụghịrị ha ọnụ ekwegasịrị ike ya inweta nwere mmekọ.
The Nchoputa nwere ike inyere aka scores nke singletons na-, na mgbe Tinder na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị saịtị, nwere nanị otu njuaka photos na a ole na ole sekọnd iji kọwaa na nnukwu ụgwọ ọrụ na ndị ha bụ ga-ihe ịrụ ụka adịghị anọchi anya.
Na a akụkọ e bipụtara na Proceedings of the National Academy of Sciences, Tanya Vacharkulksemsuk na Mahadum California, Berkeley, na-akọwa otú ya otu eji video footage si a na-agba mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ihe omume na-egosi otú ma ndị ikom ma ndị inyom bụ ndị nakweere ọzọ "irutụrụ" nọrọ nwere mmekọ ịrịọ a na-elu ụbọchị.
O mere ihe na nwere na a Tinder-ịke ngwa. Ndikom atọ na ụmụ nwanyị atọ kwetara ka abụọ dị iche iche profaịlụ kere ha. One gosi ha na-emeghe poses, dị ka leaning azụ ụkwụ gbatịrị agbatị, ma ọ bụ iguzo ọtọ na ngwá agha ha si mbara. Na ndị ọzọ na profaịlụ, ha nakweere "contractive" poses, ọmụmaatụ, site hunching elu, ma ọ bụ mpịachi ha aka ya na-agafe ha ụkwụ.
Vacharkulksemsuk uploaded na profaịlụ n'elu ngwụsị izu abụọ na e dere nke mịpụtara ihe ndị kasị mmasị ịhụnanya. dị ka e buru amụma, na ihe na-emeghe nọrọ adịrị kasị mma na okwu nke na-arịọ na-ezute. Ọzọ, ma ndikom ma ndinyom uru, ọ bụ ezie na mmetụta bụ ibu maka ndị ikom.
Ede ihe na magazin, ndị nchọpụta kpọrọ splaying nke aka na ụkwụ na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị photos "akara ererimbot ke ata, emeghe-abụghị ọnụ ngosipụta na efu mmata. "
"Dabere na anyị pụta garnered si ọtụtụ puku otu mmadụ na n'ezie ọsọ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ihe omume, na-eji a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ngwa, oputara ihe na postural mgbasa pụrụ ime nnọọ ka iwelie mmadụ Ohere nke na-eme ka a ọma mbụ ihunanya njikọ,"Ha tinye.
Vacharkulksemsuk kwo na dominance na openness-eme ka ndị mmadụ na ihe mara mma n'ihi na akara ererimbot ke ata ndị mmadụ na-eme mma n'ebe ọrụ na-emeghe ndị ọzọ njikere ịkọrọ ihe ha nwere na ndụ.
Studies in anụmanụ ndị ọzọ na-atụ aro na ụmụ mmadụ nwere ike ịbụ ya mere dị iche iche. Vacharkulksemsuk kwuru banyere ngosipụta nke ụmụ anụmanụ nēbu ha behinds na kenwe. Nwoke gorillas flaunt ha physicality site agba na-agba ọsọ saidwees, mgbe peacocks adọta peahens site n'igosipụta ha ọdụ feathers.
Ịnagide Otu onye site nudi nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị aghọwo nke abụọ kasị nkịtị ụzọ achọta a na onye òtù ọlụlụ, mgbe nzute site enyi. Fọrọ nke nta 91m ndị na-eji smartphones ịchọta mmekọ, banyere 70% bụ ndị bụcha ndị agadi 16 ka 34, ndị dere ede.
"On dị otú ahụ nyiwe, ebe na-a ụbọchị mmadụ na onye ọzọ ọtụtụ ndị na-amalite na a foto ma ọ bụ obere na mmekọrịta, ọ bara uru ịmata otú jirichaa onye Ohere n'ime ndị dị otú ahụ a ebelata etiti oge,"Ha tinye.
Mgbe nile na-ewere ọgwụ '-enyere aka igbochi abụọ ...
Ahụ mmadụ magburu onwe ya - ma ọ dịghị nwere ...
21464	4 Nkeji edemede, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, Ian Sample, Main ngalaba, online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, Psychology, mmekọrịta, Science, The Guardian, Tinder, UK ozi ọma
← Virtual Adị Porn na-abịa Dyson Onya Pure Cool Link Air Purifier →